Malagasy miatrika ny valanaretina Covid 19 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Rehefa avy nanjohy ny RN2 ny Lakroa ny herinandro lasa, dia ny RN7 sy ny RN25 indray no hozaraina izay hita sy re. Lalam-pirenena mianatsimo miatsinanana ireo ; mampifandray ny renivohitra sy i Fianarantsoa ary i Mananjary. Ny fiainana ny fiantraikan’ny valanaretina no ampifandraisina amin’ny zava-misy.
Mihasimba aloha ny lalam-pirenena faha 7. Misy fanamboarana ihany, toy ny efa mahazatra, fanampitampenana, amin’iny Ambohimahasoa iny. Saingy ny eo vita, ny eo simba. Ary tsapa aza fa ny efa nisamborana vola ihany no mbola hisamborana vola. Antsirabe-Tana moa dia manahirana ny mandeha amin’ny tara miendakendaka. Miverina indray ireo « ankizy mpiasa lalana », manampina fotaka ny goudron, izay tsy fahita firy raha tsy amin’ny tany mahantra toa antsika. Dia toy izany ireo mpitrandraka volamena ankarihary ao Mandalahy, endriky ny firoboroboan’ny fahantran’ny olona sy ny fahantran’ny rafi-pitantanana tsy mivoatra. Samy mandavaka sy mitrongy, fa mibanaka ny fandrobana ny harem-pirenena.
Mbola tsy miverina tanteraka ny fifamoivoizana, hany ka hita ho mangingina ny lalam-pirenena. Ny RN 25 dia tsy ahitana ireo voankazo nampiavaka iny lalam-pirenena iny. Toa nisitrika hatramin’ny akondro. Ireo fiarabe mpanangona sisa hita mijanona etsy sy eroa, miandry. Mbola tsy miverina amin’ny fiainana andavanandrony ny olona. Tsy nisy anefa ny valanaretina tany an-dohasaha tany. Tsy manao arovava ny olona. Amin’ireo tsena anaty lalana toy ny ao Kelilalina-Ifanadiana, dia ny mpividy no be noho ny entana amidy.
Efa afaka miara-miaina amin’ity valanaretina ity ny olona. Hoy ireo olona efa voa fa sitrana : « tazo ihany izy ity, ary azo sitranina tsara. Ny manahirana fotsiny dia izy mampipongatra ireo aretina samihafa miafinafina any, toy ny diabète, ny asthme, na hafa koa… ny tena olana dia ny fanilikilihana rehefa fantatry ny olona fa voan’ny corona ny tena ». Ny lafiny fampiroboroboana ny asa sy ny fivelomana hampivoatra, araka izany, no tena andrasan’ny olona. Tsy miandry izay tosika fameno na ny toy izany loatra. Fa ny tosika andrasana dia ny famerenana tanteraka ny fifandraisan’ny faritra mba ho lafiny fampiroboroboana ny asa famokarana isam-paritra koa ny fifandraisan’ny mpiara-belona. Tsy « état d’urgence » ho fanakanana sy fameperana akory ireny fa fanalalahana sy fandaminana mazava. Mila tsinjovina koa anefa ny mety fisehon’ny hain-tany izay toa manambana amin’ny faritra sasany ao Atsimo. Anjaran’ny fanjakana ny mijery izay tena lafiny fampandrosoana ny faritra mba hahafahan’ny rehetra misitraka ny harena ara-drariny : harena an-kibon’ny tany, fizahantany, harena voajanahary… misy fampandrosoana any an-dohasaha miankina tanteraka amin’ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Olona vitsy foana no tena manimba ny tontolo iainana saingy mandravarava any amoron’ala.
Mbola mila fanofanana goavana na dia ireo tompon’andraikitra nahita fianarana aza. Be no mihevitra ny toerany sy ny andraikiny ho fahefana sy voninahitra fotsiny fa tsy fahaiza-manao. Ireo teraky ny avy amin’ny faritra ihany no sakana tsy mampandroso ny any amin’ny faritra niaviany. Ny fiarahamonina sy ny fomba rahateo mbola manindrahindra izay heveriny fa tafita. Mbola lavitry ny fandrosoana araka izany ny faritra maro. Manampy trotraka ny sakana rahateo ny fivangongoan’ny rafi-panjakana foibe ka mahatonga ny faritra maro ho tany lavitra andriana. Satria nivadika ho tompomenakely ny mpiasam-panjakana any ifotony.